(Dhageyso):-Ra’iisal wasaare ku Xigeenka DFS Mahdi Maxamed Guuleed oo kulan Afur ah u Sameeyey Golaha Abwaanada Soomaaliyeed – hareerley
(Dhageyso):-Ra’iisal wasaare ku Xigeenka DFS Mahdi Maxamed Guuleed oo kulan Afur ah u Sameeyey Golaha Abwaanada Soomaaliyeed
Ra’iisal wasaare ku Xigeenka Xukuumada FS Mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) Oo Kulan Afur ah u sameeyay Golaha Abwaannada Soomaaliyeed Oo runtii kaalin muhiima ku leh dib-u-heshiisiinta Dalka iyo Dhismaha dawlanimada.
Ra’iisal wasaare ku xigeenka ayaa Golaha Abwaanada U sheegey in tahay uun isbarasho kulankani siyaasadna ka Caagan yahay oo uu doonayey oo kaliya in ay isku bartaan.
kulankan ayaa waxaa Goobjoog ka ahaa wasiirka Maaliyada DFS mudane Cabdirixmaan ducaale beyle iyo Wasiirka Warfaafinta DFS mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye iyo Abwaanada Soomaaliyeed.
Mudane Mahdi Maxamed Guuleed ayaa ku tilmaamey in ay Abwaaniinta Soomaaliyeed ay kaalin muhiim ah ay kaga jiraan Dalka isagoona soo qaatey halabuurada ay ku soo saa’idayaan Abwaanada Bulshada Soomaaliyeed, isagoona intaasi raaciyey in abwanadu dareenkooda ku Cabiraan marwalba Gabayada,ruwaayadaha iyo heesahaba isagoona soo qaatey heesihii in dhawaala la curiyey oo uu ku tilmaamey kuwa isaga soo jiitey haddii ay noqoto nagudayo walaal iyo iska jir dowladeena iyo yaa muwaadin ku aawey.
Mudane Mahdi ayaa sidoo kalena tilmaamey in wadanku fikrado xagjirnimo ah oo meela kale laga soo minguuruyey ay wadanku Aafeeyeyeen laakiinse Abwaanadu fikradahooda wali hal abuuradooda nool yihiin ayna door ka qaadan doonaan Samatobixinta Shacabka.
Ugudanbeena Ra’iisal wasaare ku xigeenka ayaa ku buraarujiyey in ay markale door ka qaataan Abwaanadu kaalimahooda hal Abuurnimana Sii kordhiyaan.
← Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya oo ka qeybgalay Madasha Stockholm ee Nabadda iyo Horrumarka:-(Sawiro)
May to bring Brexit deal to British parliament in June →